Bido Ebe a
Ndị ntụgharị akwụkwọ ikike
Ihe kpatara 3 ị ga-eji were ndị ntụgharị akwụkwọ asambodo
Ụlọ ọrụ ndị na-azụ ahịa n'ahịa mba ọzọ na-achọkarị ọrụ ntụgharị asụsụ iji gwa ndị ahịa ha ma ọ bụ obodo ha ozi. Ọ nwere ike ịnwa ịnwa iji ngwa ntụgharị asụsụ ma ọ bụ onye ọrụ na-asụ asụsụ abụọ. Agbanyeghị, ọ nweghị n'ime ndị a na-abụkarị nhọrọ kacha mma, ọkachasị mgbe ị na-atụgharị akwụkwọ azụmahịa. Ihe ndị a bụ ihe atọ dị mkpa iji tụlee iwere ndị ntụgharị asụsụ ọkachamara n'ọrụ kama.
1. Izi ezi na nkwekọ
Izi ezi bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa iji were ndị ntụgharị asụsụ ọkachamara n'ọrụ. Ha na-asụgharị okwu ma hụ na ụtọ asụsụ, akara edemede na mkpoputa niile ziri ezi.
Dị ka ndị ntụgharị akwụkwọ ikike na-abụkarị ndị nwere nkà odee, ha ga-enyere aka mee ka ozi gị doo anya yana nkenke. Na mgbakwunye, ha na-elekwasị anya n'ịdị n'otu n'ime ederede dum, na-enyere aka nweta olu akara ọnụ ọnụ.
2. Nghọta omenala
A na-enwekarị mgbanwe n'etiti mba ndị gafere asụsụ ahụ. Iwu na ụkpụrụ na-agbanwe, ụkpụrụ ọha mmadụ na-adịgasị iche, na ihe okwu pụtara nwere ike ịdị nnọọ iche. Okwu a na-ahụkarị, nke ịhụnanya n'otu asụsụ nwere ike iwe iwe n'asụsụ ọzọ. Ihe ndị a niile nwere ike ịgbakwụnye na ntụgharị asụsụ nkịtị nwere ike imerụ azụmahịa na mmekọrịta gị.
Iji gbochie nke a ime, ọ kacha mma ị were ndị ntụgharị akwụkwọ nwere asambodo. Ha na-amakarị karịa naanị mkpụrụokwu ndị ịchọrọ ịtụgharị asụsụ. Ndị ntụgharị asụsụ ọkachamara na-aghọtakwa ọtụtụ ihe gbasara omenaala a na-ejikọta asụsụ ahụ. Ha nwere ike ịtụgharị akwụkwọ gị ka ha na-ahụ na ozi e zubere na-agafe nke ọma.
Ọtụtụ ndị ntụgharị akwụkwọ nwere asambodo ọkachamara na otu ụlọ ọrụ. Nke a bara uru n'ihi na ha nwere ike ịghọtakwu ihe ị na-agbalị ikwu. Dị ka ndị dị otú a, ha nwere ike hụ na ozi doro anya karịa, nke dị nkenke, na nke ọkachamara edere.
N’asụsụ 411, anyị nwere ndị ntụgharị akwụkwọ ikike maka ihe karịrị asụsụ 160. Ha maara nke ọma na akwụkwọ n'ozuzu, anyị nwekwara ndị ntụgharị nke ọkachamara na teknụzụ, mbata na ọpụpụ, iwu, ịzụ ahịa, sayensị, nlekọta ahụike, na ọrụ obodo. Kpọtụrụ anyị taa maka ngụ n'efu maka mkpa ntụgharị asụsụ gị.
Email anyị: service@language411.com
Kpọọ anyị: 510 842 3550
© 2021 Asụsụ 411 | Ikike niile echekwabara